Lakeside Cabin (#3) e-Echo Beach & Spray Park - I-Airbnb
Lakeside Cabin (#3) e-Echo Beach & Spray Park
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguNoel
Unyaka wonke ikhabhathi ebekwe ngokumangalisayo ngaphakathi kweFort Campground kumbindi weQu'Appelle Valley. Ukusuka kule ndawo kukuhamba imizuzu emi-3 ukuya elunxwemeni, ipaki yokutshiza, ibala lokudlala, kunye nokuqaliswa kwesikhephe. Ikhosi yegalufa, ivenkile, kunye neyokutya nayo ikufuphi.
Ikhabhathi enefenitshala ibandakanya: amagumbi okulala ama-2 aneebhedi zobukhulu bendlovukazi, igumbi lokuhlala elinebhedi ye-futon, ikhitshi elinendawo yokutyela, ibhafu egcweleyo, iTV yesathelayithi, iBBQ ekwidesika egqunyiweyo, i-intanethi ye-WIFI ekhawulezayo, izinto eziluncedo, kunye neendawo ezi-2 zokupaka ezinikezelweyo.
I-Qu'Appelle Valley intle kwaye iyimbali, inabela empuma nasentshona ngapha kwesibini kwisithathu seSaskatchewan. Ummandla ongqonge iFort Qu'Appelle, unamachibi ama-4 aziwa njenge "Calling Lakes" (Pasqua, Echo, Mission, kunye neKatepwa) onke adityaniswe kunye noMlambo iQu'Appelle. Intlambo izaliswe zizinto ekufuneka zenziwe, iindawo zokuphonononga, imbonakalo-mhlaba yendalo, kunye neziganeko zonyaka kunye nemisebenzi.
4.72 · Izimvo eziyi-18
Umbuki zindwendwe ngu- Noel
Sinika iindwendwe indawo, kodwa ziyafumaneka ukuba kukho into eza phezulu. Ufowunela kwiofisi yethu kumgca 306-332-4866 ukusuka 10am ukuya 4pm, iintsuku ezisi-7 ngeveki. Ngaphandle koko, ukuthumela imiyalezo nge-app ka-Airbnb nako kulungile.
Sinika iindwendwe indawo, kodwa ziyafumaneka ukuba kukho into eza phezulu. Ufowunela kwiofisi yethu kumgca 306-332-4866 ukusuka 10am ukuya 4pm, iintsuku ezisi-7 ngeveki. Ngaphandle…